Fidinana ifotony: Nitsidika tao Maevatanana sy Ankazobe Atoa Minisitra
Published Date: 2 octobre 2021
Mitohy ny fidinana ifotony sy fanatonana akaiky ireo mpiara-miasa. Nitarika ny delegasiona androany Sabotsy 2 Oktobra 2021 tao Maevatanana sy Ankazobe ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Andriamatoa IMBIKI Herilaza.
Vao tonga tao Maevatanana dia ny Fonjambe avy hatrany no nojerena. Tao dia nijery ny fiaimpiainan’ireo voafonja. Taorian’ny fifampiresahana dia tapaka fa ho jerena manokana ny fomba hahafahana mamatsy rano ao. hatomboka koa ny ezaka hahavelona ny « camp pénal ». Hanolotra « lecteurs vidéo sy ventilateurs » ary efa nanome vola hividianana vary sy hena mba hiova kely ny sakafon’ireo voafonja.
Nandritra ny fihaonana tamin’ ireo Mpitsara sy mpiasan’ny fitsarana kosa dia nametraka ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Andriamatoa IMBIKI Herilaza, ny amin’ny fanafaingana ny asam-pitsarana sy ireo fomba fiasa mila arahina, hiarahan’ny rehetra hanova ny fomba fijerin’ireo vahoaka.
Tao Ankazobe indray dia tao amin’ny fonja no naleha aloha. Ny jiro no olana voalohany hita tao ka tonga dia hitondra vahaolana ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana.
Ny fonja hoy izy no mila tena jerena. Ka izay no mahatonga an’ilay resaka taha 70/30. Mila manao famindrana voafonja koa hanenana ny fihoaran’isa loatra. Nilaza koa Andriamatoa IMBIKI Herilaza fa hisy fotodrafitrasa hotokanana ato ato.
Eo amin’ny fampidirana olona am-ponja dia tokony jerena akaiky ny hoe mila ampidirina tokoa ve ilay olona. Mila hamarinina ny resaka antotan-taratasy, ary tokony hisy fotoam-pitsarana ady heloka bevava iray isan-kerinandro fara-fahakeliny, ary havoaka haingana ny factum (didim-pitsarana). Mila atao mazava sy azon’ny vahoaka tsara ny didim-pitsarana satria maro no tsy mahay izany.
Mila miara-miasa tsara hoy izy ny Mpitsara, sy ny Mpiraki-draharaha ary ny Mpandraharahan’ny Fonja. Tokony tsy hisy ny tarazoka na kilema ao anatin’izay. Efa tamin’ny 9 ora alina mahery vao vita ny dinikasa natao tao amin’ny Lapan’ny Fitsarana Ankazobe.
← Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG: Hisy ny fitsarana fahatelo
Fifaninanana hidirana ao Antetezambaro: Ho fantatra anaty 48 ora ireo 500 afaka →